Masaf The hacks Event Live - Masaf Of The Day
Bal qiyaas kulan ugu awooda badan ee aqoonta aad u yeelan doontaa si aad u hesho on qol keliya.
Taasi waxa aad ka heli marka aad u tagto Masaf ah hacks shir Live.
On kamilnan ah 3 maalmood, 17 of Wajiyada badan la garan karo ee ganacsiga masaf ka wada heli 3,000 nin iyo haweenka in ay doonaya in ay bartaan waxyaalaha qarsoon ganacsiga ay.
Munaasabadan ayaa waxaa in 2018 wadarta record gudubtid in iibiyay imaanshaha in xoogaa ilbiriqsiyo ah.
Out oo ka mid ah 52,000 users masaf firfircoon dunida oo dhan, kaliya jajab yar u helay in ay qayb la xirfadlayaasha run.
Haddii aadan rabin in la saaray, ahaan ugu jirnaa dhacdo sanadka soo socda.
Waxaa hadda la dhawaaqay!